Global Voices teny Malagasy » Tsy mamerina ny fahalalahana ny fandraisana loka momba ny haisoratra: Antsafa niarahana tamin’i Behrouz Boochani, mpanoratra sady mpangataka fialokalofana, · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 01 Novambra 2019 16:09 GMT 1	 · Mpanoratra Fred Petrossian Nandika (fr) i Suzanne Lehn, Candy
Sokajy: Aostralia, Iràna, Nouvelle Zelande, Fanoherana, Fifindràmonina, Fitantanam-pitondrana, Hevitra, Mediam-bahoaka, Mpitsoa-ponenana, Politika, Zon'olombelona
Pikantsary avy amin'ilay lahatsary fanadihadiana mampiseho ny fiainan'i Behrouz Boochani tao amin'ny toby tao Manus.
[Lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny 29 Aogositra 2019]
Lazaina i Aostralia fa firenena iray tsara fandray ireo mpifindramonina,  fa ny fomba fitondrany amin'izao fotoana izao an'ireo mpitsoa-ponenana sy mpangataka fialokalofana dia miteraka hasosorana, na avy ao anatiny izany, na eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena . Zavamisy iray izay angamba ny tena mahalaza azy dia ny zava-nanjo an'i Behrouz Boochani, Kiorda Iraniàna mpanoratra, mpamokatra sarimihetsika no sady mpanao gazety ary mbola mpitsoaponenana ihany koa. Taona enina no lanin'i Boochani tao amin'ny toby fitazonana tao Manus . Tamin'ny 2017, rehefa nakatona ilay toby, izay tao Papouasie-Nouvelle Guinée no nisy azy, nafindra  tany Port Moresby i Boochani, tsy mbola azo antoka izay ho tohin'ny fiainan-koaviny.
Ny fanapahankevitr'i Boochani hanohy ny fisiany mba ho afaka hijoro ho vavolombelona momba ny toedraharaha iainana ao amin'ilay toby no nitondra azy ho amin'ny fahavitan-javatra nampitolagaga :nanoratra diary iray izy ary nampiasa ny fandefasana hafatra WhatsApp mba hamondronana ilay fitantarana ny momba ny tenany sy nahazoany loka, No Friend But the Mountains: Writing from Manus Prison  ( Tsy manana namana afa-tsy ny tendrombohitra: Nosoratana avy aty am-ponjan'i Manus,  dika amin'ny teny frantsay an'ny Ed. Hugo Doc 2019) dia ny Loka Victoria ho an'ny Literatiora  sy ny loka avy amin'ny Praiminisitra ao Victoria ho an'ny tantara tsy noforonina, tamin'ny Janoary 2019.
Araka ireo tatitra , sy ny fitantarana mivantana avy amin'i Boochani ao anatin'ilay bokiny , olona 16 raha kely indrindra no namoy ny ainy tany amin'ireny toby fitazonana ireny. Mbola marobe ireo ohatra hafa momba ny famonoantena voarakitra, ny fampijaliana tena, ary ny herisetra tafahoatra. Ireo famantarana dia mampiseho fa matory anaty tranolay feno lomotra sy miaraka amin'ny voalavo ary kadradraka ireo olona voatàna any, anatin'izany ireo vehivavy sy ankizy, no sady tsy mahazo fikarakaràna ara-pahasalamàna. Herisetra iray nateraky ny politikan'ny fanilihan-draharaha ho any ivelany  ao Aostralia, napetraka mba handresena lahatra ny olona tonga any Aostralia amin'ny alàlan'ny fanasaziana ireo tonga avy any an-tsambo mba hitady fialofana azo antoka.
Ity ny ampahany fohy fampahafantarana ilay lahatsary fanadihadiana notontosain'i Behrouz Boochani tamin'ny telefaona finday ary mampiseho ny toby ao Manus :
Tsy ela akory izay, afaka nifampiresaka tamin'i Boochani tamin'ny fiteny persiàna aho, tao amin'ny WhatsApp. Ity ny dika narafitra avy tamin'ilay antsafa:
Fred Petrossian :Marobe ireo maminavina hoe toy ny fitondra olona nanao heloka bevava no fitondra ireo mpitsoaponenana sy mpangataka fialokalofana tany anatin'ireny toby fitazonana ireny, nefa tsy nanao heloka bevava na iray aza izy ireny. Ianao milaza fa mbola ratsy lavitra noho izany aza. Azonao hazavaina ve?
Behrouz Boochani : Zavadehibe ny manipika hoe tsy manan-jo na kely aza ny olona any anatin'ireny toby ireny. Raha ireo mpanao heloka bevava any am-pigadràna aza afaka misitraka ireo zo fototra sasantsasany, toy ny zo ho afaka miantso an-telefaona, na dia any anatin'ny rafitra faran'izay ratsy indrindra aza, tsy omena an'ireo mpitsoaponenana sy mpangataka fialokalofana kosa any anatin'ireny toby ireny izany zo fototra izany.
Ny fotoana no tena zavadehibe entina hamaritana io rafitra io. Ny olona aiditra am-ponja dia mahafantatra ny halavan'ny sazy hoefainy, fa tsy izany izahay, ary tsy hainay hoe rahoviana izahay no ho afaka handao an'ity toerana ity. Mitondra ny tena fijalian-tsaina izany. Sady koa, tsy misy afa-tsy vanimpotoana tokana eto amin'ity nosy ity. Ary tena manelingelina, satria tsy hainao intsony ny mamaritra ny fotoana mandalo.
FP : Anatin'ny toedraharaha toy izany, ahoana no mety hahafahan'ny fanoherana hisy?
BB : Karazany roa ny atao hoe fanoherana. Ny iray dia isambatanolona, toy ny fitokonana tsy hisakafo. Samy manana endrika fanoherana an'ny tenany manokana ary tsy itoviany ny olona: nanomboka nanoratra aho, iray hafa nanangana zaridaina mirefy 1 metatra toradroa, iray hafa nihira. Endrika iray hafa amin'ny fanoherana ihany koa ny fampijaliana tena : ny fampiasàna ny vatanao ihany ho toy ny hany fitaovampiadiana satria fitaovana politika iray ny vatana. Afaka manisa mihoatra ny zato aho tamin'ny toerana nanaovan'ny olona an'izany tamin'ny tenan'izy ireo. Ary notaterina tany anaty tatitra  maro fa hoe fomba fanao nihanaka teny anivon'ireo mpitsoaponenana izany.
Karazany iray hafa ilay iarahan'ny rehetra, hetsika iraisana anoherana ny rafitra. Tamin'ny Febroary ny fitroarana tena goavna tao amin'io fonja io. Samy nampiasa herisetra ny andaniny roa, ireo mpiambina ny toby sy ireo voatazona, nitarika nankamin'ny fahafatesan'ny mpitsoaponenana iray, Reza Barati. Nandritra ny tapabolana, nanao hetsika fitakiana am-pilaminana ireo voatàna tao. Tamin'ny Janoary 2015 ny faharoa, fotoana nitokonan'ny olona 800 tsy hisakafo nandritra ny roa herinandro. Nanomboka nampiasa herisetra ny mpitantana ny toby, naniboka ireo mpitarika, namely toby roa ary nandratra olona maro. Ny hetsika fahatelo dia nitranga tamin'ny 2017 rehefa nandà tsy ho afindra any an-toerana hafa ireo voatàna. Naharitra 23 andro io ary tsy nisy herisetra, saingy tany amin'ny fiafarany dia notafihana izahay ary betsaka no naratra. Ny zavanisy, hoe na teo aza ny maha-mpitsoaponenana anay nefa notafihan’ ireo mponina, dia natosiky ny fampielezankevitra aostraliàna mampiseho anay ho toy ny loza mitatao ho an'ny fiarahamonina…..
FP : Manoratra ianao hoe “ny tahotra no lalaovin” i Aostralia mba hampisamantsamahana ireo mpitsoaponenana sy ny mponina. Ireo mpitsoaponenana rahateo efa aseho ho toy ny mpanao heloka bevava ary ny mponina ho toy ny olondia. Tsy nitsahatra nitondra vokatra hatrany teny amin'ny olona ve io resaka io ?
BB : Rafitra miorina amin'ny tahotra io, ary hatramin'ny andro voalohany izy no efa namorona tsy fifampitokiana sy fifankahalàna teny anivon'ny mponina sy ireo mpitsoaponenana. Samy mizaka ny vokatr'io rafitra io daholo ireo vondrona roa andaniny sy ankilany. Saingy rehefa nanomboka nivoaka sy nifanerasera tamin'ny vahoaka ireo mpitsoaponenana, nisinda ilay resaka fa mbola tavela kosa ny tsy fifampitokisana.
FP : Nahoana no lavin'i Aostralia ny tolokevitr'i Nouvelle-Zélande handray mpitsoaponenana miisa 150, ary nilazany  izany ho “fotoana fanararaotra ara-barotra” ho an'ireo mpampita olona antsokosoko” ?
BB : Satria tsy tian'ny Antoko Liberaly aostraliàna ho foanana ny toby fitazonana, noho ny antony marobe. Ny voalohany dia ampiasain-dry zareo liberaly io politikan'ny fitazonana io mba hampihorohoroana ny olona ao anatin'ny fifaninanany amin'ny antokon'ny mpiasa, amin'ny fitenenana bontolo hoe “raha tsy eo izy, hiverina ireo olon'ny sambo”. Fanambaràna feno fitaka izany. Tsy hoe satria naverina an-kerisetra nitodi-doha ireo sambo dia tsy hiverina. Tsy niteraka vokany maharesy lahatra ireo toby ao Manus sy Nauru. Misy vola be mihodina ihany koa ao anatin'io politikan'ny fitazonana io, miaraka amin'ireo vola an-davitrisa maro laniana amin'ny femetrahana kolikoly. Ary farany, iray amin'ireo antony mahatonga ny olona hiijaly, dia ny fanavakavahana sy ny habibiana lozantany.
FP : Vao haingana kely, nisy mpitsoaponenana tao Manus nilaza rehefa notolorana ny loka momba ny zon'olombelona tany Soisa, fa zendana izy mahita ny tsy firaharahian'ny olon-drehetra manoloana ny zavamisy any amin'ireo toby fitazonana ao Aostralia. Ahoana no mahatonga izany? Ahoana no hamoronana fanairana ny tsikalakalam-pieritreretana?
BB : Nandritra ny enina taona, andro sy alina, tsy nitsahatra aho nanoratra. Ny fahasarotana lehibe indrindra dia miatrika governemanta liberaly tandrefana iray isika, izay miteraka karazana sary iray miabo any an-tsain'ny daholobe. Misy karazana fahaizamamorona artistika sy ara-literatiora ao Manu izay hahita ny làlany any ivelany sy afaka hanaitra ny sain'ny rehetra. Ohatra, ny bokiko dia hatonta any aminà firenena 25, ary ny sarimihetsika nataoko dia ho alefa any amin'ireo fetibe marobe iraisampirenena. Amin'ny alàlan'ny fomba firesaky ny taokanto, azon'ny olona atao ny mahatakatra tsara ilay rafitra, fa tsy toy ny omen'ireo mpampahalala vaovao.
Na ao Aostralia aza, mirehidrehitra ny adihevitra momba ireo toby. Ny antokon'ny mpiasa midradradradra  hoe tsy vitan'i Peter Dutton, minisitry ny atitany aostraliàna, ny misahana ny fifehezana ny sisintanin'ny firenena, tamin'ny fanamafisana fa, hatramin'ny 2014, olona 80.000 no tonga tamin'ny fiaramanidina mba hangataka fialokalofana. Nalefa ihany koa ireo fiampangàna kolikoly , satria miteraka fandaniana an-davitrisa io politika io no sady mamorona asa ihany koa.
Raha miampanga ireo fanitsakitsahana miseho lany ireo ny olomanandaza sy ireo fikambanana iraisampirenena maro, toy ilay mpilalao ao Hollywood Russel Crowe  sy ny Amnesty International , ireo sasany mpanao politika kosa mipao-tsatroka amin'ilay lasitra aostraliàna. Ilay efa praiminisitra lefitra tao Italia fahiny, Matteo Salvini , dia efa ela no nitanisa  ny rafitra fifndramonina ao Aostralia ho idealy ho an'izao tontolo izao. Tsy misy na iray aza manamarina  ny hoe noforonina avy any Aostralia ny ady ataon'i Trump amin'ireo mpitsoaponenana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/11/01/144210/
 firenena iray tsara fandray ireo mpifindramonina,: https://fr.wikipedia.org/wiki/Immigration_en_Australie
 dia miteraka hasosorana, na avy ao anatiny izany, na eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena: https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/australia-offshore-refugee-policy-failed-190217104337722.html
 tao amin'ny toby fitazonana tao Manus: https://fr.wikipedia.org/wiki/Solution_du_Pacifique
 No Friend But the Mountains: Writing from Manus Prison: https://en.wikipedia.org/wiki/No_Friend_But_the_Mountains
 Tsy manana namana afa-tsy ny tendrombohitra: Nosoratana avy aty am-ponjan'i Manus,: https://livre.fnac.com/a13649936/Behrouz-Boochani-Temoignage-d-une-ile-prison-De-l-exil-aux-prix-litteraires?oref=00000000-0000-0000-0000-000000000000&Origin=SEA_GOOGLE_PLA_BOOKS&esl-k=sem-google%7cng%7cc294196405911%7cm%7ckpla429860535815%7cp%7ct%7cdc%7ca58200328279%7cg1553156614&gclid=EAIaIQobChMI4c6M_cSo5QIVyYbVCh0-Zgn4EAQYAiABEgJoCvD_BwE&gclsrc=aw.ds
 Loka Victoria ho an'ny Literatiora: https://en.wikipedia.org/wiki/Victorian_Premier%27s_Literary_Awards#Victorian_Prize_for_Literature
 ao anatin'ilay bokiny: https://www.goodreads.com/book/show/39284186-no-friend-but-the-mountains
 Ireo famantarana : https://foreignpolicy.com/2019/07/24/trumps-attack-on-asylum-seekers-was-made-in-australia-png-manus-island-nauru-new-zealand-refugees-offshore-detention/
 politikan'ny fanilihan-draharaha ho any ivelany: https://www.refugeecouncil.org.au/offshore-processing/
 na teo aza ny maha-mpitsoaponenana anay nefa notafihan’: https://www.theguardian.com/australia-news/2017/jul/31/manus-island-refugees-seriously-injured-in-machete-attacks
 Russel Crowe: https://mashable.com/2017/11/05/russell-crowe-refugees-australia/?europe=true
 Amnesty International: https://www.amnesty.org/fr/get-involved/take-action/stop-abuse-two-thousand-people-in-nauru-manus-island/
 efa ela no nitanisa: https://www.smh.com.au/world/europe/australia-s-hard-line-on-asylum-seekers-echoes-around-the-world-20180622-p4zn3g.html